Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Tantara momba ny fahazazan-jaza nataon'i Joe Willock sy Untold Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anaram-bosotra "Joe". Ny tantaran'i Joe Willock Childhood Story Plus Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny fiainan'i Joe Willock- Tany am-boalohany ka hatramin'izao. Ny trosa ans-wer ary Twitter
Ny famakafakana dia ahitana ny fiainany voalohany, ny fiainam-pianakaviana, ny tantaram-piainany talohan'ny laza, ny fitombon'ny tantara malaza, ny fifandraisan'ny tena, ny fiainanao manokana, ny zava-misy amin'ny fianakaviana ary ny fiainany sns.
Eny, fantatry ny rehetra fa iray amin'ireo tanora mahafinaritra izy manana fanantenana lehibe. Na dia izany aza, vitsy monja no mihevitra ny biolojia Joe Willock izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Tantara momba ny fahazazan-jaza nataon'i Joe Willock sy ny zava-misy momba ny Biography Untold - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Joseph George Willock dia teraka tamin'ny andro 20 ny volana aogositra 1999 tao amin'ny London Borough of Waltham Forest, United Kingdom. Teraka fahatelo sy lahimatoa tamin'ny ray aman-dreniny i Willock - reny mahafinaritra sy raim-pianakaviana tsara tarehy ary rainy mitovy amin'ny anarany Charles.
Hihaona amin'ireo ray aman-drenin'i Joe Willock. Ny trosa ArsenalFC
Araka ny TheSun UK, Joe Willock's aorian'ny nahaterahany dia hitan'ny dokotera manana fahasembanana amin'ny halavan'ny tongotra. Midika izany fa ny tongony iray no fohy kokoa noho ny hafa. I Poor Joe nandritra ny vanim-potoana niainany dia tsy maintsy mandresy ny olana ara-batana sy ara-tsaina nateraky ny tsy fahampiana ity. Nisy fiatraikany ny hafaingany amin'ny hafainganam-pandehany ka izany no antony tsy izy no tsara indrindra amin'ny sprinters.
Avy amin'ny fianakavian'i Joe Willock: Na dia teraka tany Angletera aza izy, fa ny fianakavian'i Joe Willock dia avy amin'ny Afro-Karaibeana. Manana ny fianakavian'izy ireo avy any Montserratian, teratany anglisy any Overseas sy Nosy any Karaiba izy ireo. Raha araky ny voalaza eto ambany dia nosy iray be korontana ny Montserratian raha nipoaka volkano nandritra ny antenatenan'ny 1990.
I Joe Willock dia manana ny fiaviany ara-pianakaviana ary avy any Montserrat
Teo anelanelan'ny 1995 sy 2000, ny fipoahana volkano dia nanery ny ampahatelon'ny mponina ao amin'ny nosy handositra, indrindra ao amin'ny Fanjakana Mitambatra. Tsy dia fantatra raha anisan'ireo nandositra tany Angletera ny ray aman-drenin'i Joe Willock talohan'ny nahaterahan'i Joe zanany lahy tany 1999.
Voalohandohan'ny fiainana: I Joe Willock dia lehibe tao amin'ny alan'i Waltham sy ny rahalahiny mirahalahy antsoina hoe Matty sy Chris. Tamin'izany fotoana izany, ny trano niaviany, izay any amin'ny North East of London dia tsy lavitra ny kianja taloha any Arsenal, Highbury. Io fikaonan-doha akaiky io dia nahatonga ny fananganana ankohonana manao baolina kitra. Ny finiavana amin'ny lalao dia nahatonga ireo ankizilahy telo rehetra (Matty, Chris, ary Joe) tonga ao an-tsain'izy ireo fa mila lasa mpilalao baolina matihanina izy ireo rehefa lehibe.
Fotoam-pianakaviana: Joe Willock dia avy amin'ny fiaviana fianakaviana ambany ambany. Samy tsy mpanan-karena ny dadany sy ny dadany ary matetika izy ireo no niady mafy hanohizan'ny fianakaviany. Namoy ny asany i Charles sy ny vadiny, indray mandeha mba hahita ny zanany hahita fahombiazana.
Tantara momba ny fahazazan-jaza nataon'i Joe Willock sy ny zava-misy momba ny Biography Untold - Fanabeazana sy fanabeazana
Ilay Ray manana hery miasa: Charles Willock, dadan'ny filalaovan'ny baolina kitra sy ny hery mitondra ny varotra ankohonany dia nanapa-kevitra fa hanao ny diany mamadika ny zanany telo lahy ho mpilalao baolina kitra.
Joe Willock Careup fananganana. Ny trosa amin'i Arsenal & DMail
Nampian'i Charles i Joe sy ny rahalahiny tsy hihemotra amin'ny olana rehetra, mitondra azy ireo any amin'ny zaridainam-baolina samihafa hanampiana sy handray anjara amin'ny fifaninanana. Notarihiny ny ny faritry ny zanany lahy ary nanao izay azo atao ho azy ireo mba handalovana fitsapana amin'ireo ekipa taranja baolina kitra.
Ny dadan'i Lucky dia nahita ny fahitany an'ireo zanany miasa araka izay tiany. Matty, lahimatoany lahy voalohany nantsoina hiatrika fitsarana miaraka amin'ny Akademia Arsenal, Chris sy Joe Willock avy eo nanaraka. Ny hafalian'ny fianakaviana iray manontolo dia tsy nisy fetrany taorian'ny nahitany ireo zazalahy telo niatrika fitsapana tamin'ny loko hanidina ary nidirana tao amin'ny Akademia Arsenal.
Tantara momba ny fahazazan-jaza nataon'i Joe Willock sy ny zava-misy momba ny Biography Untold - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Joe Willock ny fitiavana baolina kitra dia nahita azy nanao sonia ny fifanarahany voalohany tamin'ny Arsenal tamin'ny faha-4. Ho an'ny dadany izay be pitsiny Charles, dia ny fiantohana ny iray amin'ireo zanany lahy farafaharatsiny ho an'ny ekipa voalohany.
Ny fiainam-piandohana voalohany nataon'i Joe Willock. Ny trosa Arsenal FC
Samy mirahalahy- Matty, Chris ary Joe daholo, no nahazo ny laharana rehetra tany Gunners. Nanonofin'izy ireo ny ho lasa trio rahalahy voalohany hilalao amin'ny Ligy Premier. Namela ny asany i dadan'izy ireo tsy izany fotsiny hiaraka amin'ireo zanany lahy tao amin'ny oniversite, fa manampy azy ireo hitantana ny fikarakarana baolina kitra. Araka ny nametrahan'i Joe Willock azy indray mandeha;
“Rehefa nihalehibe aho dia ny dadanay irery no olona niahy ny hilaza momba ny lalao nataoko. Taorian'ny lalao, dia lazainy amiko na nilalao tsara na ratsy aho. Tsy mihaino olon-kafa aho afa-tsy ny raiko ”.
Ireo rahalahy telo ireo dia nandroso hatrany tamin'ny sokajin-taona mandra-pahatongan'ny tsy ampoizina nitranga, roa ary ny roa lahy tao amin'ny Willock.
Tantara momba ny fahazazan-jaza nataon'i Joe Willock sy ny zava-misy momba ny Biography Untold - Road to Fame Story
Tsy ny zava-drehetra no nandeha ho an'ny zazalahy Willock nandritra ny taona niarahan'izy ireo niaraka tamin'i Arsenal. Ny rahalahin'i Joe Matty dia navotsotra tamin'ny taonany 15 noho ny fampisehoana tsy nahafa-po. Chris, amin'ny lafiny iray, dia nanapa-kevitra ny hiala any 2017, ho any Portugal hanohy ny asany. I Joe Willock irery no olona navelany. Raha niresaka ny traikefa dia nilaza izy indray mandeha;
“Nila nizarazara sy nifanaraka tamin'ny lalana samy hafa aho sy ny rahalahiko. Hitako fa ho avy. Fantatro fa ho avy ny fotoana, indray andro izay tsy hiarahanay rehetra. Tsy nanamora ny nanadino ahy izany rehefa nankany Portugal i Chris. ”
Ho an'i Joe, tena sarotra ho azy ny naka rehefa nandao an'i Benfica ny zokiny lahy akaiky dia Chris. Samy niara-niasa hatry ny fony vao teraka izy mirahalahy, izay samy akaiky indrindra.
“Izahay dia nizara ny efitra fatoriana mitovy. Io no manazava ny maha-akaiky anay. Rehefa lasa i Chris, dia toy ny nandao ny ankohonantsika ny fianakaviako ” hoy i Joe Willock izay niady tamin'ny baolina kitra nandritra ireo fotoana ireo.
Tantara momba ny fahazazan-jaza nataon'i Joe Willock sy ny zava-misy momba ny Biography Untold - Mitsangàna amin'ny tantara
Nifindra toy nyNihazona fivoahana voalohany tamin'ny ekipa voalohany no nofinofiny farany. Ny fahombiazana ara-panatanany voalohany dia tonga talohan'ny namaranany ny asany tanora. Fotoana iray izy no nanampy ny mpiara-miasa aminy U17 tamin'ny nandreseny ny The Future Cup.
I Joe Willock no nivadika voalohany nandritra ny taona fahatanorany. Ny trosa amin'ny Twitter.
Ao amin'ny 2017, i Joe Willock dia niantso tao amin'ny ekipa zokiolona ao Arsenal. Nahazo ny medaly voalohany izy tamin'io taona io (The 2017 FA Community Shield) nefa tsy nilalao tamin'ny fifaninanana.
Joe Willock- Mankalaza ny tropy voalohany amin'ny maha-mpilalao senior azy
Ny fotoana voafaritra: I Joe Willock tamin'ny fotoana niorenany tamin'ny lobaka Arsenal dia tamin'ny Mey tamin'ny 2019 rehefa nosoloana ny Mesut Ozil tsy nahomby tamin'ny lalao famaranana tamin'ny Lalao Europa. Ny fankasitrahana an'ireo mpankafy Arsenal dia tsy voamarika fa maniry mafy ny hahita azy ho lasa ekipa voalohany izy ireo.
Fa raha tokony hianjera, ny afovoany dia nitombo avy amin'ny tanjaka mankany amin'ny tanjaka. Joe Willock's fotoana fiatoana manaraka dia tonga nandritra ny 2019 International Champions Cup. Tamin'ity indray mitoraka ity, nahazo fampisehoana tsara kokoa izy tamin'ny midfield Bayern. Nampiasa ity lalao ity i Willock handefasana fanambarana ho an'ireo mpankafy fa afaka hifaninana amin'ny tsara indrindra izy.
Fotoana iray no nandresen'i Willock ny fon'ny Arsenal Fans. Ny trosa Ny masoandro
I Joe Willock tamin'ny fanombohan'ny vanim-potoana 2019 / 2010 dia nanohy niaritra ny fiakaran'ny meteorika niaraka tamin'i Arsenal. Hitany ny tenany ho lasa iray amin'ireo fananan'ny midfield mafana indrindra ao amin'ny klioba, dia hira izay nahazo ny tenany fifanarahana maharitra eo amin'ny fikambanana.
Nanatanteraka ny nofinofin-janany i Joe Willock. Ny trosa Arsenal FC
Indray mandeha, zazalahy kely izay niditra tao amin'ny Arsenal efa-taona, taty aoriana, dia namela irery mba hanidina ny sainam-panjakan'i Willock tsy nisy rahalahiny, dia miaina ny nofinofiny izao. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Tantara momba ny fahazazan-jaza nataon'i Joe Willock sy ny zava-misy momba ny Biography Untold - Relationship Life
Miakatra ny lazany, mety ho be mpankafy maro no misaintsaina ny fanontaniana; Iza no sakaizan'i Joe Willock ?. Tsy azo lavina ny zava-misy fa ny endriny mahafatifaty dia tsy hahatonga azy ho voaloboka mahavariana ho an'ny vehivavy.
Iza no sakaizan'i Joe Willock
Amin'ny fotoana fanoratana dia toa i Joe Willock dia nifidy ny hifantoka amin'ny asany, ka tsy misy dikany ny hananana sipa na vady. Na izany aza, misy tsaho iray milaza fa nanana sipa izy taloha.
Ny fiampangana: Araka ny notaterin'i TheSun, i Joe Willock dia nampangaina ho nanaraka ny dian-dehilahy zazalahy ratsy toetra tao Arsenal Ashley Cole - amin'ny alàlan'ny fanakorontanana amin'ny sakaizan'ny sakaizany. Ny fihetsik'i Joe dia nahita ireo mpankafy nahita azy fa namolavola sary ratsy lahy tany anaty kianja.
Araka ny filazan'i TheSun, dia voalaza fa nanasa azy tany Londres i Joe Willock, nividy tapakila Eurostar ho azy ary nitondra azy tany amin'ny takarivan-tena manokana izay niarahan'izy rehetra nisotro zava-pisotro £ 2,500. Taorian'izay dia niverina tao amin'ny trano nanofa trano iray tany Kensington i Joe sy ny olon-tiany izay niarahana nandry tao izy ireo nandritra ny alina. hi * py cr * ck.
Ny filazan'i Joe Willock an'i Eglantine-Flore Aguilar. Ny trosa amin'ny TheSun & FabWags
Tantara momba ny fahazazan-jaza nataon'i Joe Willock sy ny zava-misy momba ny Biography Untold - Ny fiainan'ny tena manokana
Ny hahafantaranao ny toetran'i Joe Willock dia hanampy anao hahazo sary feno kokoa azy. Na dia amin'ny fijerena tsotra fotsiny aza, i Joe dia olona mametraka angovo be dia be amin'ny fikatsahany hahatratra saika izay tiany sy amin'ny sehatra rehetra iainany.
I Joe Willock Fiainana manokana
Amin'ny fanamarihana manokana koa, toa toa olona niova i Joe Willock, izay toa manaraka ny lalan'ny fahamarinana noho ny finoany. Ny sary eto ambany dia mamintina ny finoany ary ny fahatongavany avy amin'ny tokantrano kristiana.
Nanazava i Joe Willock Religion
Tantara momba ny fahazazan-jaza nataon'i Joe Willock sy ny zava-misy momba ny Biography Untold - Mitantara ny fiainam-pianakaviana
Tsy isalasalana fa ny fianakaviana Willock dia hita fa anisan'ireo fianakaviana baolina kitra mahomby miaraka amin'ny ny fanombohana indrindra amin'ny fanombohana. Indreto misy fampahalalana fanampiny momba ny olona ao amin'ny fianakaviana izahay.
Joe Willock Dada: Fantatsika daholo ny ezaka ataon'i Charles amin'ny fanaovana antoka ny zanany lahy ho lasa matihanina, ka hahita azy ho mpitantana ny zanany lahy izy. Na izany aza, according amin'ny Football Football, Charles Willock dia mpaneho hevitra amin'ny taranja baolina kitra misy famandrihana Wyscout, sehatra mpanao baolina izay manome azy fampahalalana nomerika sy famakafakana ho an'ireo klioba 1,000 mihoatra ny. Ity sehatra ity dia ahafahany manara-maso ny lalao ataon'ny zanany lahy sy amin'ireo sehatry ny asa fanatanjahan-tena hafa. "Hitany hatrany ny lalao rehetra ataontsika sy isaky ny clip tsirairay, ”Hoy i Joe Willock
Renin'i Joe Willock: Tsy dia fantatra momba ny maman'i Joe satria noheverina fa miaina fiainana milamina izy. Tsy manakana ny zanany farany i Joe tsy hanaiky izany ampahibemaso izany wizany dia hafatra iray mamy ao amin'ny Instagram -ny izay aloaky ny teniny;
Mama, ity dia nandritra ny fotoana rehetra nahitako anao miasa fa tara ny fiafarana, ary ny fotoana niandrasana TSY HISY mba hihinanako. Ireo fotoana izay nihira nataoko tamiko mba ho resin-tory eny an-tananao izay niverenanao avy niasa. Tiako ianao Mama. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana!!
Nanokana Goal ho an'ny Mamany i Joe Willock tamin'ny hafatra mamy izay nahasarika kokoa noho ny tiana 24K.
Joe Willock Brothers: Fantatrao ve?… Ny rahalahin'i Willock sy i Matty sy Chris dia tsy nidina avy tao Arsenal raha tsy niaraka tamin'ny klioba tsara kokoa. Rehefa navotsotra tao amin'ny 15 i Matty dia nahazo fitsapana nandalo soa aman-tsara niaraka tamin'i Manchester United talohan'ny nandehanany tany Gillingham. Chris, amin'ny lafiny iray, kosa dia nandray ny varotra niaraka tamin'i Benfica taorian'ny nanenenan'i London an'i Lisbon.
Tantara momba ny fahazazan-jaza nataon'i Joe Willock sy ny zava-misy momba ny Biography Untold - Lifestyle
Ny fanapahan-kevitra eo amin'ny fampiharana sy ny fahafinaretana dia tsy sarotra ho an'i Joe Willock satria hainy ny mitantana ny volany. Noho ny tsofoka tsara avy amin'ny ray aman-dreniny, Joe, dia tsy miaina fomba fiaina mahafinaritra iray izay mora hitan'ny fiara maromaro lafo.
Joe Willock Zava-iainana Fiainana- Miaina fiainana tsotra TSY MISY mora hitan'i Luxury.
Tantara momba ny fahazazan-jaza nataon'i Joe Willock sy ny zava-misy momba ny Biography Untold - Untold Facts
NY TAFIKA RATSY TAMIN'ANDRIAMANITRA NAMONJY AZY: Fantatrao ve?… Ny rahalahy Telo rehetra dia niara-nilalao tamin'ny lalao Premier League. Na eo aza ny sokajin-taona, nilalao tamin'ny lalao iray izy telo Ny Premier League 2.
Ry rahalahy Willock. Matty dia mijoro ao afovoany (antonony), Chris (ankavanana) ary Joe (ankavia). Credit any DailyMail
Matty izay naseho etsy ambony dia nitaingina akanjo marobe Red Devils ary ny zandriny (Joe Willock) dia nivoaka avy teo amin'ny dabilio mba hiaraka amin'ny rahalahiny Chris amin'ny lalao Premier League 2 izay nitranga tamin'ny volana Mey 2017.
Ilay mpanao ody an'ny Oz: Ny mpankafy sasany dia miantso azy hoe Wizard of Oz fotsiny satria miaraka aminy Dani Ceballos dia eo amin'ireo midanadra tapa-kevitra hanongana ny Mesut Ozil hiala amin'ny toerany amin'ny maha mpilalao ekipa voalohany azy. I Ozil matetika no nijery ny sorony noho ny fifaninanana ho amin'ny toerany.
I Joe Willock dia iray amin'ireo mpilalao Arsenal izay napetraka hanongana an'i Ozil. bola: Ny masoandro
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny namakiana ny tantaranay nataon'i Joe Willock Childhood sy ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Ny Sead Kolasinac momba ny tantaram-pitiavam-pitiavam-bahaona tsy hita isa